Afọ ojuju nke ụmụ amaala na Kocaeli - RayHaber
[19 / 10 / 2019] Nzaghachi nke abụọ site na Imamoglu na ọdụ ọmịiko: 'Anọ m ezigbo iwe na m n'ihi Istanbul!'	34 Istanbul
[19 / 10 / 2019] MMM kwụsịrị na Haydarpasa Sirkeci Railway Station Tender	34 Istanbul
[19 / 10 / 2019] IMM na - ewepụ ihe ndị dị egwu na ụgbọ ala kwụsịrị	34 Istanbul
[19 / 10 / 2019] Ihe ọghọm ụgbọ okporo ígwè na Izmir! ..	35 Izmir
HomeTurkeyMpaghara Marmara41 KocaeliCitizensmụ amaala na Kocaeli Pjọ na Mobile Stop
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Mpaghara Marmara, Turkey 0
ụmụ amaala kocaelide nwere afọ ojuju na mpụga mkpanaka
A na-ewu okporo ụzọ kwụ ọtọ Citizensmụ amaala na-ekwupụta afọ ojuju ha site na ọdụ ekwentị ọhụrụ ahụ nke e wuru n'akụkụ Adnan Menderes overpass na Izmit, nke na-eme ka ọ dị mfe maka ndị njem iwere na nbudata ụgbọ njem ọha. Oge mbu nke Kocaeli Metropolitan Munara ga-ewu ya, ebe arụchara Mimar Sinan na Turgut Özal overpass na-aga n’ihu.
Ọnọdụ ọha na eze na ụmụ amaala
N’ịbawanye Salim Dervişoğlu Street na nkebi, Kocaeli Metropolitan Obodo na-ewu ebe nkwụsị ọhụụ na-akwụsị n'okporo ụzọ. Emechara Adnan Menderes ma nye ụmụ amaala ahụ. Site na nkwụsị ụgbọala a rụrụ ọhụrụ, Başiskele, Gölcük na Karamürsel ụgbọ njem ọha na eze nwere ike ibudata ma nweta ndị njem. Citizensmụ amaala nwere ike ịbanye n'okporo ụzọ ọha na eze pụtara na ha nwere afọ ojuju maka nkwụsị ọgbara ọhụrụ. N'ime oke ọrụ ndị otu nke Ngalaba Sayensị Na-ahụrụ wuru, owuwu ụlọ ọrụ mobaịlụ wuru n'akụkụ Mimar Sinan na Turgut Özal overpass Bridges na-aga n'ihu.
ANY G GA-EBURU ỌZỌ KPỌR INR IN EGO
Levent Karagöz (40) kwuru na ya na-arụ ọrụ na Başiskele na ọ na-eji Halkevi kwụsị mgbe ọ na-eme njem n'etiti İzmit na Başiskele. Nke a kpatara ọgba aghara okporo ụzọ. Ọ dị mma ịme akpa. Anyi na-ekele obodo anyi n’okwu a. Site n'ọmụmụ ihe a, mpaghara a bịara na-agachikwu anya ma na-agụkwa ya. Nnukwu okporo ụzọ ebe a anaghị ada ada. Site n'ọrụ a, anyị na-ebute ọrụ ụgbọ njem karị. ”
“OBUPU N’ANYA M Hụrụ M n’anya”
Iregba ezumike nka Cevdet Göçlü (74) kwuru na ya jiri ụlọ ọrụ mkpanaka na nke mbụ ma nwee mmasị na ya. “Thelọ ọrụ ekwentị mkpanaaka ọhụrụ mara mma n'ezie. A gbochiri ihe ọghọm okporo ụzọ nke nwere ike ime ebe a. Site n'ọmụmụ ihe a, ndị njem abụọ nwere ike ịbanye n'ụgbọ ahụ karịa, ụgbọ ala nwere ike ibili ma kwụsị n'ụzọ dị mfe. Ọ na-anọ n'okpuru àkwà mmiri ahụ na ụgbọala guzoro n'etiti n'okporo ụzọ ahụ. Ugbu a, ma ndị njem ma ụgbọ ala enwerela onwe ha. Ọ ga-amasị m ikele ndị obodo ukwu ”.
Ụmụ amaala na-achị ọchị na ihu nke Kadikoy-Kartal Metro 03 / 09 / 2012 Egwu na-achị ọchị na 17 na August, nke ụkọchukwu Minista Erdogan "Kadikoy - Kartal Metro" na-enwe obi ụtọ ịga njem. Naanị 32 si n'okpuruala na-agbanyeghị okporo ụzọ site na Kartal ka Kadikoy na-ekwu na ha na-echere ndị si n'akụkụ Eshia nke metro na Kaynarca'ya na-echere. Nke a bụ onye njem anya Kadıköy - Kartal Metro, Tevfik Eraslan (BANKER) Enwere m obi ụtọ dị ukwuu iji soro ụmụ m nwee ohere dị otú ahụ. M na-akwọ ụgbọala n'ihi na njem ndị ọzọ na-adịghị mma maka iji ezinụlọ eme ihe. Anọ m na-achọ ịkwọ ụgbọala na oge m na-anya Araç
New YHT Ankara guzobere ụmụ amaala Dolup 01 / 11 / 2016 Ọhụụ YHT nke Ankara Ankara jupụtara na ya: Obodo ọhụrụ YHT Ankara na-eto eto, agadi, ụmụ akwụkwọ, ndị ọrụ obodo nke ọ bụla nọ n'isi obodo ahụ zutere. Ụmụ amaala nyere ọrụ zuru oke na ọrụ ukwu Erdogan's Ankara YHT Station na-eme atụmatụ ụgbọ elu malitere. Ụlọ ọrụ YHT Ankara, nke na-agbakwụnye akụ na ụba n'isi ụlọ ọrụ ahụ, kwuru na afọ juru ha na ọrụ a nyere. "The ụwa Ankaralılar maka YHT ojii dị n'agbata ndị kasị ibu oru ngo," Nke a ojii bụ doo anya na-egosi na ọgwụgwụ nke na oge na Turkey, "ka o kwuru. Citizens ụbọchị mgbe ọhụrụ ebe e wuru enweghị emetụ Ankara Train Station, Ankaray, ka ejikọrọ na nyefe BAŞKENTRAY na Keçiören Metro "IGBO ...
Obi na-atọ ndị cyclists ụtọ na ụgbọ ala ọhụrụ 24 / 06 / 2014 Obi na-atọ ndị cyclist ụtọ na ụzọ ọhụrụ ahụ: Ụzọ ọhụrụ ahụ, nke e meghereghachi n'izu gara aga, ndị na-agba ígwè na ndị chọrọ ịga leta Uludağ juru idei. Ụgbọ ala ọhụrụ nke ọhụụ bụ nhọrọ nke ụmụ amaala nakwa dịka otu ìgwè ígwè. Teferrüç na-ewe ume nke ìgwè ndị chọrọ ịtụle ngwụcha izu site n'ịme egwuregwu. Ndị na-agụ cyclists na ụgbọ ala USB na Uludağ, na-ekwu na nsogbu ndị agadi enwekwaghị ekele maka obodo. Ego 10 TL kwadoro maka igwe ugbo, igwe ugbo igwe, "ndi mmadu 40 bu ugbua na-ebu, anyi kwesiri ichere ruo onwa elekere mgbe uzo ozo juru ugbua. Ugbu a, anyi nwere ike soro onye mmadu na-abanye ugbua gaa n'ugwu Sarıalan n'enweghị ichere," ka o kwuru.
Kedu afọ ojuju nwa amaala nke nwere okporo ụzọ dị elu? 03 / 10 / 2012 Nke mbụ, Ankara-Eskişehir na mgbe ahụ Ankara-Konya na nyocha ndị ọha na eze kachasị ọhụrụ maka YHT tinyere ọrụ ndị na-adọrọ mmasị. Ụzọ ụgbọ okporo ígwè malitere ịmalite ọhụụ oge edozi na Traffic High Speed ​​(YHT). Mbụ, Ankara-Eskişehir na mgbe ahụ Ankara-Konya bụ YHT nyere ọrụ. Otu afọ mgbe e mesịrị, ebe Marmaray na Eskişehir-İstanbul YHT na-eme atụmatụ ịbanye, ọrụ nke Ankara-Sivas YHT na-aga n'ihu. Usoro nile nke Ankara-İzmir na Bursa na-arụ ọrụ ụgbọ okporo ígwè dị elu. Ọ bụ ezie na a na-ezube ịrụ ọrụ ndị a iji malite n'oge na-adịghị anya, nchọpụta ọha na eze kachasị ọhụrụ nke Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications for YHT nyere onyinye dị mma. Research ...
Kedu afọ ojuju nwa amaala YHTden? 07 / 10 / 2012 Nke mbụ, Ankara-Eskişehir na mgbe ahụ Ankara-Konya na nyocha ndị ọha na eze kachasị ọhụrụ maka YHT tinyere ọrụ ndị na-adọrọ mmasị. Ụzọ ụgbọ okporo ígwè malitere ịmalite ọhụụ oge edozi na Traffic High Speed ​​(YHT). Mbụ, Ankara-Eskişehir na mgbe ahụ Ankara-Konya bụ YHT nyere ọrụ. Otu afọ mgbe e mesịrị, ebe Marmaray na Eskişehir-İstanbul YHT na-eme atụmatụ ịbanye, ọrụ nke Ankara-Sivas YHT na-aga n'ihu. Usoro nile nke Ankara-İzmir na Bursa na-arụ ọrụ ụgbọ okporo ígwè dị elu. Ọ bụ ezie na a na-ezube ịrụ ọrụ ndị a iji malite n'oge na-adịghị anya, nchọpụta ọha na eze kachasị ọhụrụ nke Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications for YHT nyere onyinye dị mma. Research ...
Ụmụ amaala na-achị ọchị na ihu nke Kadikoy-Kartal Metro
New YHT Ankara guzobere ụmụ amaala Dolup
Obi na-atọ ndị cyclists ụtọ na ụgbọ ala ọhụrụ
Kedu afọ ojuju nwa amaala nke nwere okporo ụzọ dị elu?
Kedu afọ ojuju nwa amaala YHTden?
Ndị njem Crimea anaghị enwe afọ ojuju ụgbọ okporo ígwè
Eskişehir ịmalite ọrụ YHT na Konya mere ka nwa amaala ahụ nwee obi ụtọ
Mba ndị a na-ahazi okporo ụzọ okporo ụzọ
Sincan-Kayaş Suburban Expeditions Na-enwe Obi Ụtọ na Ndị Nkụzi
Ndị si na Kadikoy-Kartal Metro, bụ ebe mbụ nwere ahụmahụ ọha na eze
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa October 2019 (354) September 2019 (555) August 2019 (508) July 2019 (633) June 2019 (504) Mee 2019 (526) April 2019 (418) March 2019 (521) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (620) November 2018 (504) October 2018 (435) September 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (581) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (542) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (535) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Ogwe 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (771) September 2014 (598) August 2014 (808) July 2014 (911) June 2014 (735) Mee 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (830) September 2012 (886) August 2012 (974) July 2012 (863) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)